တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ယခင်အစီအစဉ်ဟောင်းများပေါ့ဒ်ကတ်စ်မိုဘိုင်းလ် ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ Clock စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ 11.10.2014 09:09 အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် နာရီ (Clock) ကို အခြေခံတဲ့အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Beat the clock, Against the clock, Round the clock နဲ့ Turn back the clock တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံ နောက်သို့ Clock စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများအောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် နာရီ (Clock) ကို အခြေခံတဲ့အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Beat the clock, Against the clock, Round the clock နဲ့ Turn back the clock တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ မကျေနပ်မှုကိုဖေါ်ညွှန်းတဲ့ အီဒီယံများအောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် မကျေနပ်ချက်ရှိရင် ဘယ်လို အီဒီယံတွေကို အသုံးပြုနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Axe to grind, Settleascore နဲ့ To get even တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Devil စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများစက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် မကောင်းဆိုးဝါး (devil) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ့ Between the devil and the deep blue sea တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Game စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများစက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ကစားနည်း (game) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ The game’s up, Two can play the game နဲ့ Playawaiting game တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Foot စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများစက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ခြေထောက် (foot) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Put your foot down, Get your foot in the door နဲ့ Put your best foot forward တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Make စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများစက်တင်ဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ပြုလုပ်သည် (Make) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Makeabeeline for, Make do with နဲ့ To make both ends meet တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Double စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများသြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် နှစ်ဆ (double) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Doadouble take, Double-edged sword နဲ့ On the double တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Face စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများသြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် မျက်နှာ (face) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Poker face, Face the music နဲ့ Fall flat on your face တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Call စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများသြဂုတ် ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ခေါ်တယ် (call) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ CallaSpadeaSpade, Wake-up Call နဲ့ At Someone’s Beck and Call တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Card စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂)သြဂုတ် ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ဖဲချပ် (card) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Lay cards on the table, Haveacard up your sleeve နဲ့ Play your cards right တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Card စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများသြဂုတ် ၀၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ဖဲချပ် (card) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Cards are stacked against, Stack the deck နဲ့ Keep cards close to chest တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Sport စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အားကစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Down and out, Come out swinging, Get the ball rolling နဲ့ Hit below the belt တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Cookie စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Cookie စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ idioms အသုံးအနှုန်းတွေက Cookie-cutter, Smart cookie နဲ့ Tough cookie တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Kill စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ idioms အသုံးအနှုန်းတွေကTime to kill, Dressed to kill နဲ့ To kill two birds with one stone တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Bullet စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ idioms အသုံးအနှုန်းတွေက Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ့ Sweat Bullets တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Tongue စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂)ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ idioms အသုံးအနှုန်းတွေက A Slip of the Tongue, Cat got your Tongue? နဲ့ Tongue-lashing တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တမိနစ် အင်္ဂလိပ်စာဒီတပတ် အမေရိကန်အီဒီယံသုံး အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာမှာ I am getting cold feet အသုံးအနှုန်းကို လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ Tongue စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဇွန် ၂၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ idioms အသုံးအနှုန်းတွေက Bite one’s Tongue, Hold your Tongue နဲ့ Tongue-tied တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Ride စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ A Free Ride, Take someone foraRide နဲ့ Ride the Coattails စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြထားပါတယ်။ Fly စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမေ ၃၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ Fly off the handle, Fly by night နဲ့ On the fly စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြထားပါတယ်။ Sports စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမေ ၂၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အားကစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ့ Saved by the bell တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Soft စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမေ ၁၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများမှာ Soft spot, Soft money နဲ့ Soft sell တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Hand စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင်းပတ် idioms အသုံးအနှုန်းများမှာ Sit on one’s hand, Hand in glove, High handed နဲ့ Caught red handed တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Color ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမေလ ၃၊ ၂၀၁၄ - အရောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ In the red, White lie, Black sheep နဲ့ Golden handshake တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Election ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဧပြီလ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Full court press, Two-minute drill, နဲ့ Dig up the dirt တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Storm စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Kick upastorm, A storm is brewing, Weather the storm နဲ့ A storm inateacup တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Make စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Makeabeeline for, To makeapass at someone, To makeabundle နဲ့ To make ends meet တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Point စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ A case in point, Sticking point, Beside the point နဲ့ Scoreapoint တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Eyes ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ Catch one’s eye, Set eyes on, See eye to eye နဲ့ Keep an eye on တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Game စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမတ် ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် idioms အသုံးများမှာ Game plan, Give the game away နဲ့ Game’s over တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Money စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမတ် ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် စီးပွားရေး (business) ကို အခြေခံတဲ့ Givearun for the money, Put your money where your mouth is, Money burnsahole in one’s pocket စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Face စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမတ် ၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် စီးပွားရေး (business) ကို အခြေခံတဲ့ To keepastraight face, A long face, Makeaface နဲ့ Lose face စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Leg စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမတ် ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် ခြေထောက် (leg) ကို အခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေက Pull someone’s leg, Givealeg up နဲ့ Breakaleg တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Heart စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် စီးပွားရေး (business) ကို အခြေခံတဲ့ Wear your heart on your sleeve, Half-hearted နဲ့ Take it to heart စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Business စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင်းပတ် စီးပွားရေး (business) ကို အခြေခံတဲ့ To bankroll someone, More bang for the buck, Budget crunch နဲ့ A calculated risk စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ Kick စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယမ်အသုံးအနှုန်းများဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင်းပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ - ကန်တယ်လို့ သာမာန်အားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Kick ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေဖြစ်တဲ့ Kick the Bucket, Kick the Habit, Kick Upstairs တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Tip စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယမ် အသုံးအနှုန်းများဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင်းပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ - ထိပ်ဖျားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Tip ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေဖြစ်တဲ့ Tip of the Iceberg, The tip of my tongue, Tip one’s hand တင်ပြထားပါတယ်။ Hat စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယမ်အသုံးအနှုန်းများအပိုင်း-၂ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင်းပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ - ဦးထုပ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Hat ကိုအခြေခံတဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေဖြစ်တဲ့ Hat In Hand, Take My Hat Off To, Feather In Your Hat တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ Hat စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ် ဦးထုပ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Hat ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေဖြစ်တဲ့ Wear Many Hats ….Eat my Hat …. Keep it under your Hat တို့ကို တင်ပြဖြစ်ပါတယ်။ နောက်သို့ Zones စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (၁၀-၂၅-၂၀၁၄)
တပတ်အတွင်း မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းများ။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အာရှနဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးပါမှုနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို East-West Center ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Satu Limaye နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။ မကြေးမုံရဲ့  အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ နဲ့ ကမ္ဘာ့တလွှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများအကြောင်း သက်တံရောင်သတင်းလွှာစတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးများ ... ထိပ်တန်းသတင်းများ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားထုတ်သူကို သတ်တဲ့အမျိုးသမီး အီရန်ကွပ်မျက် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန် ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလား အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားထုတ်သူကို သတ်တဲ့အမျိုးသမီး အီရန်ကွပ်မျက် အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့မိန့်ခွန်း ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလားအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti မတူတာလေးတွေ ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (၁၀-၂၅-၂၀၁၄) သက်တံရောင်သတင်းလွှာ